စာရေးဆရာ ဝင်းငြိမ်း ၏ “ နန်းကျဘုရင် ” ဘာသာပြန်စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ် ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) (မိုးမခ) မေ ၂၁ ၂၀၁၅ ဒေါ်ဒေဝီသန့်ဇင် ၊ ထိပ်စုမြတ်ဘုရားကြီး စာရေးဆရာ မများ ...Read more »	ဖိုးထက် – ဟစ်တလာကို မေတ္တာပို့ရလေသည်
ဖိုးထက် – ဟစ်တလာကို မေတ္တာပို့ရလေသည် (မိုးမခ) မေ ၂၂၊ ၂၀၁၅ လောကကြီးတွင် အဖိုရှိလျှင် အမရှိသည်။ လျှပ်စစ်သော်မှ အဖိုဓာတ်၊ အမဓာတ်ဆိုပြီး ခွဲခြားပြီး ရှိသေးသည်ဘဲ။ ပြီးတော့ အဖိုဓာတ် အဖိုဓာတ် အချင်းချင်းဆို တွန်းလေ၏။ ထို့အတူ ကိုသောင်းမြင့်ဆိုသော အဖို လူသတ္တ၀ါကြီးနှင့် မသူဇာဟူသော အမ လူသတ္တ၀ါနှစ်ယောက်သည် ဆန့်ကျင်ဘက် ဓာတ်သဘောအရ ဆွဲငင်ကြပြီးလျှင် အကြင်လင်မယားအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ သည်မှာ လူသတ္တ၀ါ အမလေးတကောင် ကျပြီးဖြစ်လေ၏။ လူအဖိုနှင့် လူအမ ပေါင်းဖက်ဖို့ ကြိမ်နှုန်း တူစရာမလို။ တနည်း.. ကဗျာဆန်ဆန်ပြောရလျှင်...Read more »	မ င်းညွှ န့် လှို င် –ပေါ က်ခေါ င်း
မ င်းညွှ န့် လှို င် –ပေါ က်ခေါ င်း(မိုးမခ) မေ ၂၂၊ ၂၀၁၅မြို့အဝင်က မြို့နာမည်သရုပ်ဖော်ပြကွက်လား။ တောင်ဇင်းဝတဲ့ တောင်ကိုထွင်းဖောက် ဂူပေါက်ဝနဲ့ ပေါက်ခေါင်းမြို့ကကြိုဆိုပုံ။ ဒီကိုရောက်တိုင်း ကျောပေါက်တစ္ဆေခြောက်လှန့်တယ်။ ဖက်ဆစ်ဘီလူးစီးနင်း ငရဲမီးလောင်စားခြင်းရဲ့ သက်သေခံဒဏ်ရာ မြို့ခန္ဓာပေါ်က ထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသား။ ရာဇဝင်ရေးဝေဒနာနဲ့ လွမ်းမောရပါတဲ့ခရီးသည် မြို့လယ်ရောက်မှ ရင်အေးရပေါ့ကွယ်။ ရွှေအဆင်းနဲ့ ဝင်းပတောက်ပြောင် တို့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်လေ ဖက်ဆစ်ကိုခုတ်တဲ့ဓားနဲ့ မားမားမတ်မတ်စောင့်ကြပ်နေလေရဲ့။ သေချာတယ် ဒီမြို့လေးရဲ့ပုံရိပ်လွှာ ဘယ်သောအခါမှ အပ်ဖျားတစ်ထောက်စာသော်မျှ...Read more »	မောင်သာမန် – အင်ဂိုလာ၊ အမေရိကန်၊ စင်ကာပူနဲ့ မြန်မာကမ်းလွန်ရေနံသင်္ဘောလုပ်ငန်း
နေ၀န်းနီ (မန္တ​လေး) – ကဗျာ​တွေထဲက မန္တ​လေး (မိုးမခ) မေ ၂၀၊ ၂၀၁၅ ကြည်​နူးဆွတ်​ပျံ့ဖွယ်​ အလှတရားများဖြင့်​ပြည့်​နှက်​​သော မန္တ​လေးကို ​ရှေး​ခေတ်​ ကဗျာစာဆိုပညာရှိ​တော့အစ ယ​နေ့​ခေတ်​ ​​ခေတ်​​ပေါ်ကဗျာဆရာ​တွေထိ အသိမ်​​မွေ့ဆုံးအ​တွေး အလှဆုံး​သောစိတ်​ကူး ကျစ်​လစ်​​သောစကားလုံးများဖြင့်​ မန္တ​လေးကို အမျိုးမျိုးကဗျာ မရိုးနိုင်​​အောင်​ဖွဲ့ဆိုသွားကြသည်​။ မန္တ​လေးကို ကဗျာဖွဲ့ဆိုကြသူထဲတွင်​ အချုပ်​တန်းဆရာ​ဖေက မန္တ​လေး​ဆောင်းအ​အေးလွန်​ကဲပုံကို အခုလိုလှပစွာသရုပ်​​ဖော်​ဖွဲ့ထားတယ်​​လေသည်​။ “​ငွေနှင်းရယ်​မှုန်​ ၊...Read more »	ရန်လင်းအောင် – ငါများနေပြီနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ
ရန်လင်းအောင် – ငါများနေပြီနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ (မိုးမခ) မေ ၂၀၊ ၂၀၁၅ ပျော်စရာတွေများတဲ့ခေတ်မှာ နာကျည်းမှုတွေ ပိုများလာတယ် ပျော်စရာတွေများတဲ့ခေတ်မှာ ရန်လိုမှုတွေ သွေးတိုးပိုစမ်းလာတယ် ပျော်စရာတွေများတဲ့ခေတ်မှာ အကြမ်းဖက်တွေ လက်ပိုသွက်လာတယ် ပျော်စရာတွေများတဲ့ခေတ်မှာ မရှုနိူင်မကယ်နိုင်တွေ ပိုများလာတယ် ပျော်စရာတွေများတဲ့ခေတ်မှာ အမုန်းမီးတွေလေပင့်ခံရတာ ပိုများလာတယ် ပျော်စရာတွေများတဲ့ခေတ်မှာ အိပ်မရညတွေ ပိုများလာတယ် ပျော်စရာတွေများတဲ့ခေတ်မှာ ဗုံမဟုတ် ပတ်မဟုတ်တွေ...Read more »	ကာတွန်း မောင်မောင်ဖောင်တိန် – သူလည်း ငါတို့နဲ့ အတူတူ
ကာတွန်း မောင်မောင်ဖောင်တိန် – သူလည်း ငါတို့နဲ့ အတူတူ (မိုးမခ) မေ ၂၀၊ ၂၀၁၅ Like this:Like Loading...Read more »	ဆရာဦးတင်လင်း (ကျောင်းဆရာ RIT, Temasek Poly, Singapore) (တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း)
ဆရာဦးတင်လင်း (ကျောင်းဆရာ RIT, Temasek Poly, Singapore) တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (မိုးမခ) မေ ၂၀၊ ၂၀၁၅ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ မြန်မာကလပ်ကို လူထုနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ပေးဖို့ စင်ကာပူအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းက ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်သဘော မြန်မာရာဂဏန်းလောက်နဲ့ စင်ကာပူ NTU တက္ကသိုလ်မှာ လုပ်ဖို့နေရာ ပေးပေမယ့်၊ စင်ကာပူရောက်မြန်မာများစွာ တောင်းဆိုမှုကြောင့် လူ၅၀၀၀...Read more »	ဖိုးထက် – ကျွန်တော့်လောဘတွေ
ဖိုးထက် – ကျွန်တော့်လောဘတွေ (မိုးမခ) မေ ၂၀၊ ၂၀၁၅ လိုအင်ဆန္ဒတွေ အခုတလောများနေသည်။ ပြီးတော့ ရသင့်ရထိုက်သော ပိုက်ဆံအကြွေးတွေ ပြန်ရသည်။ အလုပ်အတွက် ထည့်ဝင်ထားသော ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းက ထင်ထားသည်ထက် ပိုရသည်။ ငွေယားလေးများရှိသောသူပီပီ ဖြတ်သွား ဖြတ်လာ လမ်းသွားရင်း တွေ့သမျှပစ္စည်း ငါဝယ်နိုင်တယ်ဆိုသည့်အပေါက်ဖြင့် ၀င်ကြည့်သည်။ ကိုင်ကြည့်သည်။ ဈေးမေး သည်။ သို့သော်...Read more »	ခက်ဦး – လွဲချင်လည်း ရောက်ရောက်နေတဲ့ ခေတ်
ခက်ဦး – လွဲချင်လည်း ရောက်ရောက်နေတဲ့ ခေတ် (မိုးမခ) မေ ၂၀၊ ၂၀၁၅ ခေတ် ခေတ် ခေတ် အစလည်းမရိုး အလယ် ထိုနည်းလည်းကောင်း အဆုံး ဗြောင်းဆန်ဦးမယ့်ခေတ်။ ခေတ် ခေတ် ခေတ် စာရေးဆရာတွေ တော တောင်နဲ့ မင်းတြားကြီးဘုန်းတော်ဘွဲ့ မဖွဲ့ဆိုတဲ့ခေတ်။ ခေတ် ခေတ် ခေတ် ကဗျာဆရာတွေ...Read more »	သားကြီးမောင်ဇေယျ – ဥပဒေစစ်မြေပြင်က ခွပ်ဒေါင်းများ
သားကြီးမောင်ဇေယျ – ဥပဒေစစ်မြေပြင်က ခွပ်ဒေါင်းများ (ဒီမိုပညာကျောင်းသားများ ၆ ကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ်) (မိုးမခ) မေ ၁၉၊ ၂၀၁၅ သာယာဝတီတရားရုံး လမ်းမတန်းဝင်ပေါက်မှာ သံဆူးကြိုးအထပ်ထပ်နဲ့ ရဲလုံခြုံရေးတွေချထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ၀င်ခွင့်မရ ပါ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဘေးဝင်ပေါက်ကို လာခဲ့ပါတယ်။ ဘေးဝင်ပေါက်ရောက်တော့ လူငါးဆယ်လောက် ရုံးစု ရုံးစုနဲ့ ရောက်နေပါပြီ။ ဒါဟာ ကျောင်းသားတွေ...Read more »	ကာတွန်း ATH – မသထာ ရေစာ
ကာတွန်း ATH – မသထာ ရေစာ မေ ၁၉၊ ၂၀၁၅ ကာတွန်းဆရာ ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ Like this:Like Loading...Read more »	ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) – မျှော်လင့်ချက်တို့ ရှင်သန်ရာ
ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) – မျှော်လင့်ချက်တို့ ရှင်သန်ရာ (မိုးမခ) မေ ၁၉၊ ၂၀၁၅ တရားပွဲ၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာပွဲစတဲ့ အကြောင်းများနဲ့ အရပ်ဒေသအတော်များများ (ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ) ရောက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာ ပြန်တွေး လိုက်တိုင်း ကြည်နူးစရာ၊ လိပ်ပြာသန့်စရာအကောင်းဆုံးလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ခရီးတစ်ခုအဖြစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက၊ ကယန်းမျိုးနွယ်စုတို့ အများဆုံးနေထိုင်ရာ၊ ဖယ်ခုံမြို့ကို (၂၉-၄-၂၀၁၅) နေ့က ရောက်ခဲ့ဖြစ်တယ်။ အကြောင်းကတော့ “ဒုတိယအကြိမ်မြောက်...Read more »	ကာတွန်း မောင်မောင်ဖောင်တိန် – ဂုဏ်
ကာတွန်း မောင်မောင်ဖောင်တိန် – ဂုဏ် (မိုးမခ) မေ ၁၈၊ ၂၀၁၅ Like this:Like Loading...Read more »	ဆောင်းဝင်းလတ် – ခေတ္တ – မစ်ရှီဂန် နဲ့ ခေတ္တ – နယူးဇီလန်
ဆောင်းဝင်းလတ် – ခေတ္တ – မစ်ရှီဂန် နဲ့ ခေတ္တ – နယူးဇီလန် မေ ၁၈၊ ၂၀၁၅ (မေလ ၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်သော “၀င်းအောင်-အောင်ဝေး ကက်ကင်း စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ”မှ စာရေးဆရာ ဆောင်းဝင်းလတ်၏ ပြောဆိုချက်များကို ပြန်လည် ဖော်ပြပါသည်။) ကျနော် ချစ်တဲ့ ကိုအောင်ဝေးနဲ့ ကျနော်ချစ်တဲ့ ကိုဝင်းအောင်တို့ရဲ့...Read more »	မောင်မိုးသူ(ဘကြီးမိုး) မွေးနေ့ပွဲ ပြုလုပ်
မောင်မိုးသူ(ဘကြီးမိုး) မွေးနေ့ပွဲ ပြုလုပ် ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်)၊ မိုးမခ။ မေ ၁၈ ၂၀၁၅ စာရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ မောင်မိုးသူ(ဘကြီးမိုး) ၏ အသက်(၇၈) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီ စားသောက်ဆိုင် ငြိမ်းချမ်းခန်းမ တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလ (၁၇) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀)...Read more »	လင်းရောင်ခြည် စာပေဝိုင်း (၃) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် နှင့် “ မိုး” စာပေ၊ “ အနာဂတ်အိပ်မက်” စာပေတို့ မှ စာအုပ်များ မိတ်ဆက်ပွဲ ပြုလုပ်
လင်းရောင်ခြည် စာပေဝိုင်း (၃) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် နှင့် “ မိုး” စာပေ၊ “ အနာဂတ်အိပ်မက်” စာပေတို့ မှ စာအုပ်များ မိတ်ဆက်ပွဲ ပြုလုပ် ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) မိုးမခ မေ ၁၈ ၂၀၁၅ လင်းရောင်ခြည်...Read more »	မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၇)
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၇) (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၅ တိုင်းပြည်ခြေလှမ်း လမ်းပေါ်မှာ ကောက်ကျစ် အဆိပ်ပြင်းက အဆိပ်ပြင်း ကောက်ကျစ်ပြန်လုပ် ကိုယ်ကျိုးသမားက ကိုယ်ကျိုး အာဏာပြန်လုပ်တယ်။ မိစ္ဆာဆူးညှောင့်က ဆူးညှောင့် မိစ္ဆာပြန်လုပ် ကျောင်းသားသပိတ်ကို တန်ပြန်သပိတ်ပြန်လုပ်တယ်။ ဖြောင့်မတ်သူကို မဖြောင့်မတ်သူက ပုံဖျက်တယ်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို ရှုပ်ထွေးေ၀၀ါး ပြန်လုပ်တယ်။...Read more »	ဖိုးထက် – ရွေးကောက်ပွဲမမှန်ရင် ကွဲမယ့်စုံတွဲ
ဖိုးထက် – ရွေးကောက်ပွဲမမှန်ရင် ကွဲမယ့်စုံတွဲ (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၅ “လူတယောက်ရဲ့ ကောင်းကွက်ချည်းဘဲ.. လိုချင်လို့တော့ မရဘူးရယ်… ဒွန်တွဲတဲ့ ဆိုးကွက်လည်းပါမယ်.. အံဝင်ဂွင်ကျ ဘယ်ဘုရားမှ မတတ်နိုင်ဘူး… နီးစပ်တာနဲ့ ရောင့်ရဲတတ်ကြရတာလဲ မင်းအသိပါဘဲ” တဲ့။ ဆရာကြီး စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးပြီး ကွယ်လွန်သူ အဆိုတော်ကြီး စိုင်းထီးဆိုင်ဆိုသောသီချင်းသည် ၎င်းတို့စုံတွဲအတွက် အလွန်မှန်သည်။ အဘယ်စုံတွဲ...Read more »	ကာတွန်း ဘီရုမာ – ကြွယ်ဝပုံက
ကာတွန်း ဘီရုမာ – ကြွယ်ဝပုံက မေ ၁၇၊ ၂၀၁၅ For Who? ကာတွန်းပြပွဲမှ ကာတွန်းဖြစ်ပါသည်။ Like this:Like Loading...Read more »	ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) – မိုးလုံးပြည့်တိမ်တောင်နှင့် မြေပြင်အနှံ့ ကြက်ဥများ
ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) – မိုးလုံးပြည့်တိမ်တောင်နှင့် မြေပြင်အနှံ့ ကြက်ဥများ (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၅ ဒီနှစ်ထဲမှာ ယဉ်ကျေးလိမ္မာတပည့်လေးတွေထဲက အထူးသဖြင့် မဲဆန္ဒပေးခွင့် အသက်ပြည့်မီလာပြီဖြစ်တဲ့ လူငယ်လေးတွေ မိမိဆီရောက်လာတိုင်း ၂၀၁၅ ရင်ခုန်သံ အတော်လေးမြန်လာကြတဲ့စကားတွေ အတော်ကြားလာရတယ်။ အခါတိုင်း ပညာရေး၊ ဓမ္မရေးရာများကို အလေးထားပြီး မေးဖြေ၊ ပြောကြားလုပ်ကြတာများပေမယ့် ဒီနှစ်ကတော့ ၂၀၁၅...Read more »	မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – သတိ … အန္တရာယ်က… လက်တကမ်းမှာ ….
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – သတိ … အန္တရာယ်က… လက်တကမ်းမှာ …. (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၅ ဇာတ်ညွှန်း ဇာတ်ကွက်အရ… အပိုအလိုမရှိ ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်ကပြ အသုံးတော်ခံနေတဲ့ ပြဇာတ်ကလေးက ပြီးလု ပြီး ခင်အချိန် နောက်ဆုံးအပိုင်းရောက်ခါနီးခါမှ၊ ဟုတ်နိုး ဟုတ်နိုးနဲ့ ဇာတ်မျောလာနေရာက အဖြူ အမဲ ခွဲခြားလို့ရနေပါပြီ။...Read more »	သစ်ကောင်းအိမ် – ညဆုိုင်း …
သစ်ကောင်းအိမ် – ညဆုိုင်း … (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၅ စီးကျသွားတဲ့ ချွေးတစက်ရဲ့အသံဟာ ပေါက်တူးနဲ့ မြေအောက်ကသတ္တုတခုခုနဲ့ ထိရှသံလုို ငယ်သံပါနေတယ် အိမ်အပြန် စက်ရုံတံခါးဝမှာ ကမ္ဘာတဖက်ခြမ်းမှာ လပါးဝခဲ့တဲ့ လပြည့်ညက အလုပ်ရှင်တယောက်လုို ခါးထောက်စုိုက်ကြည့်နေတယ် အိမ်အပြန် မေလရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာ တံလျှပ်တွေ မဲပုံးထောင်နေတယ်။ (၁၆ မေလ၊ ၂၀၁၅) Like...Read more »	မောင်ရစ် – ရွေးကောက်ပွဲလားဟေ့ … သူဖျားနေတယ်
မောင်ရစ် – ရွေးကောက်ပွဲလားဟေ့ … သူဖျားနေတယ် (မိုးမခ) မေ ၁၅၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ် ပြောတယ်။ အဓိကအတိုက်အခံပါတီကြီးဖြစ်တဲ့ NLD က တမြန်နေ့လောက်ကမှ မီဒီယာတွေကတဆင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို နေရာအပြည့် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အတိအကျ...Read more »	Page 1 of 61712345...617»
ဆရာဦးတင်လင်း (ကျောင်းဆရာ RIT, Temasek Poly, Singapore) (တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း)	ဇာနီကြီး - အေရှားဝေါ	ရန်နောင်(ဗိုလ်တထောင်) - ငွေကျပ်သန်းပေါင်း (၅၅) ဘီလီယံ အရှုံးပေါ်နေတဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန	ငြိမ်းချမ်းအေး - လူဖြစ်ရင် ပြီးပြီ	ဇင်လင်း - ၂၀၁၅ မှာ တကျော့ပြန် အလိမ်မခံကြစေလို	ဖိုးထက် - ဟစ်တလာကို မေတ္တာပို့ရလေသည်	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - အခွန်	ဆောင်းလူ - အပြာကား	မောင်သာမန် - အင်ဂိုလာ၊ အမေရိကန်၊ စင်ကာပူနဲ့ မြန်မာကမ်းလွန်ရေနံသင်္ဘောလုပ်ငန်း	ဖိုးထက် - ကျွန်တော့်လောဘတွေ	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများ မောင်လူပေ - အမေတို့ ရွာ (၂)
စာပဒေသာ ကောက်စာများခင်မျိုးချစ်ရေး၊ ဂျုနီယာဝင်း ဘာသာပြန် - နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် လမ်းခွဲခြင်း